Umhlangano onobungane uzonikeza abahambi nge-Iberostar Mehari 4 *. I-Tunisia, i-Djerba ingenye yezindawo zokungcebeleka ezingcono kakhulu ezisempumalanga, okuheha abavakashi hhayi nje kuphela ngamasiko okuqala, kodwa nangamazinga aphezulu enkonzo.
Ukuhlala okunethezeka futhi okunethezeka kuyoba ukuhlala kwakho e-Iberostar Mehari 4 *. I-Tunisia, i-Djerba yenza iholide lakho ligcwele futhi lifudumele. Ukuze izivakashi zokuhlala zitholakale izinketho ezinjalo.
Igumbi Incazelo Intengo (nge-euro, ngomuntu ngamunye)
Umndeni Ikamelo elincane elikwazi ukuhlala kubantu abangaba ngu-4. Ukwamukela izivakashi kunezibhedlele ezimbili kanye nengxenye unikezwa, kanye nezinsipho ezimbili ezithambile. Igumbi linesidiski. Ngokufaka iminyango yesilayidi, izithameli zifaka ithala elihle elinikeziwe, lapho ungayithanda khona ingadi. Kusukela ku-50
Standard Igumbi eliyinkimbinkimbi elihlotshiswe ngemibala ephathekayo ephathekayo. Izivakashi zikhona imibhede eyodwa nengxenye, engasethwa ngokuhlukana noma ishintshwe. Ukuphumula nokuhlala okungeziwe kukhona umbhede we-sofa. I-balcony ingaba yibheke engadini noma olwandle.
Okungeziwe Ngokuzilibazisa nomndeni omkhulu noma inkampani enobungane, le nketho ilungile. Imele amakamelo amabili ajwayelekile ahlanganiswe nomnyango wangaphakathi, uma kunesidingo, ingafakwa ngesikhiye.
Wonke amakamelo ahlotshiswe ngokuhambisana nesitayela saseMedithera. Ingaphakathi licatshangelwa ngemininingwane encane kunazo zonke, ukuze lezi zivakashi zizwe zikhululekile, futhi zithole injabulo yobuhle.
Amakamelo e-Iberostar Mehari 4 * (Tunis, Djerba) anakho konke okudingayo ukuze uhlale ukhululekile. Lapha izivakashi zingasebenzisa amasevisi alandelayo:
Ukufinyelela kwamahhala kwi-Intanethi engenantambo;
Ukushisa emoyeni ngokulawula komuntu ngamunye;
I-balcony ehlinzekwayo noma i-terrace;
Iphephile ngokukhiya kwe-electronic comb;
Ifoni yocingo yokukhulumisana kwasekhaya nasemhlabeni jikelele;
Indlu yokugezela ehlangene, igcwaliswe ngesesekeli sezinwele nokugeza.
Ukuphathwa kwe-Iberostar Mehari 4 * kunakekela ibhodi eligcwele lezivakashi. I-Tunisia, i-Djerba ibhekwa ngamasiko athakazelisayo wokudla. Ukudla kwamazwe ngamazwe nakho kwakhiwe lapha. Izivakashi zingadla ngokuhambisana nezinhlelo ezinjalo:
Ukudla kwasekuseni, kwasemini nasekuseni ngesitayela se-buffet;
Kudla i-la carte;
Ukudla okubandayo phakathi nosuku;
Iziphuzo ezidakayo neziqabulayo zokukhiqizwa kwendawo;
Ngaphezu kokudla, iphakheji ihlanganisa ukuvakashela i-sauna, kanye nehholo lezemidlalo.
Ibhodi eligcwele - ama-breakfasts, izidlo kanye nama-dinners ngaphandle kokuphuza.
Ibhodi lesigamu - izikhathi zokuphumula kanye nezidlo ngaphandle kweziphuzo.
"Ukukhanya konke okubandakanya" - ukudla okuyisithathu ngosuku okufaka phakathi kwentengo yeziphuzo ezithambile.
Izindawo zokudlela ezithambile kanye nemigoqo epholile zivulekele izivakashi ze-Iberostar Mehari Djerba 4 *. I-Tunisia, i-Djerba ibhekwa ngamasiko athakazelisayo wokudla, angatholakala kulezi zikhungo:
I-La Guellala iyindawo yokudlela edlalwa ngokukhethekile ekhethekile ekhiqizweni lendawo. Kusukela ngo-19: 00 kuya ku-22: 00, izivakashi zingadla lapha, ngubani oye wathatha itafula kusengaphambili. Ingaphakathi lehholo lenziwe ngesitayela se-laconic classical kanye nokusetshenziswa kokuhlobisa kwaseMpumalanga.
I-Midoun iyindawo yokudlela enkulu lapho izivakashi zinikwa khona ukudla okuphelele. In the buffet ungakwazi ukunambitha izitsha zombili zokudla kazwelonke kanye European. Ngaphandle kwegumbi lokudlela elihlotshiswe ngokunethezeka, kunesithakazelo esihle.
I-Melita iyi-lobby bar, esebenza kusukela ngo-10: 00 kuze kube phakathi kwamabili. Lapha ungakwazi ukujabulela iziphuzo zekhwalithi, futhi ulalele umculo omnandi.
I-bar ye-beach iyindawo eyintandokazi yabalandeli bokuzilibazisa kolwandle. Lapha awukwazi ukuvuselela kuphela iziphuzo ezipholile, kodwa futhi ukuzivuselela ngokwakho kokudla okusheshayo kwendawo yendawo.
Ibha ye-poolside iyokujabulela nge-cocktails ehlukahlukene ne-ayisikhilimu. Ngesikhathi sakusihlwa, i-pizza kanye ne-hamburger ziyakhonzwa.
Izinkumbulo eziningi ezinhle kanye nokubonakala okucacile kuzokunika ukuphumula e-Iberostar Mehari 4 * (Tunis, Djerba). Ukubuyekeza mayelana nalesi sikhungo kuqukethe ulwazi mayelana nezinzuzo zalo:
Izinombolo zilungiselelwe ngokucophelela ukufika kwezivakashi ezintsha (lokhu akusho ukulungisa kuphela, kodwa futhi nokuqedwa kwazo zonke izinkinga);
Abasebenzi baphatha ngokucophelela izivakashi futhi bazama ukuzithokozisa ngazo zonke izindlela;
Umsebenzi omkhulu wethimba le-animation;
Insimu enhle nehlelwe kahle;
Ingqalasizinda enhle yezingane;
Lapho befika, izivakashi ziphathwa iziphuzo ezithambile;
Ukulungiswa okusha nokuhle emakamelweni;
Hlanza kokubili emakamelweni nasensimini yonke;
Ukukhuphuka kancane ekujuleni kolwandle, okukuhle kakhulu izivakashi ezinezingane;
Amathuba amaningi okuzijabulisa ebhishi.
Izici eziningana ezingalungile zingahambisane nokuphumula e-Iberostar Mehari 4 * (i-Tunisia) (isithombe nokubuyekezwa kuhanjiswe kulesi sihloko). Kuyafaneleka ukulalela ukunakekelwa okunjalo kwezivakashi:
Ukusetshenziswa kwesiqandisini kungenzeka kuphela ngezindleko ezengeziwe;
Ebhishi kukhona inqwaba yezilwane zasolwandle, okuyinto abasebenzi behhotela abangahlanzi;
Esigumbini sokugezela kukhona isikhunta esinengi nesiphunga esinamandla semvula;
Esikhathini sokudlela akukho ukudla okwanele kokudla kwezingane;
Esikhathini sokudlela ukuze uthole izitsha okumnandi kakhulu, imigqa emikhulu ibuthane;
Esikhathini sokuzivocavoca imishini yokugqoka;
On the beach njalo baya amaBedouin ngamakamela, okushiya esihlabathini ukuze kube nemikhiqizo yokuphila kwabo.
Izimo zokuphila eziduduzayo nezokuzijabulisa eziqhakazile ziyohlinzekwa ngu-Iberostar Mehari GV 4 *. I-Tunisia, i-Djerba ingenye yezinketho ezithandwayo kakhulu zokubalekela okusebenzayo noma ezothando. Lapha amasiko asempumalanga ahlangene namazinga asevisi aseYurophu.